Tag: ganacsiga blogging | Martech Zone
Tag: ganacsiga blogging
In kasta oo aan qornay Blogging Corporate For Dummies qiyaastii 5 sano ka hor, wax aad u yar ayaa is beddelay istiraatiijiyadda guud ee suuqgeynta maaddada iyada oo loo marayo bartaada shirkadda. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, marka aad qorto wax ka badan 24 qoraallo blog, jiilka taraafikada ayaa kordha ilaa 30%! Sawir-gacmeedkan oo ka socda Abuurista Buundada wuxuu ku dhex socdaa hababka ugu fiican ee loogu talagalay hagaajinta bartaada barta. La iima iibin inay tahay hagaha ugu dambeeya… laakiin way fiicantahay.
Isniin, Janaayo 11, 2010 Axad, Febraayo 9, 2014 Douglas Karr
Waxaa jira in badan oo ka mid ah warbaahinta bulshada adduunka halkaas oo xukuma guusha blog-ka ee cabbiraadda hawlgelinta sida faallooyinka. Ma yeelo Ma jiraan wax xiriir ah oo u dhexeeya guusha boggan iyo tirada faallooyinka ku saabsan. Waxaan aaminsanahay in faallooyinka ay saameyn ku yeelan karaan baloog - laakiin maxaa yeelay maahan wax aad si toos ah u xakameyn kartid anigu dhag jalaq uma siin. Haddii aan rabo faallooyin, waxaan qori lahaa cinwaanno cinwaannada baiting, waxyaabaha lagu muransan yahay
Waxaan horay ugala hadlay soo bandhigiddan, laakiin maanta intii aan ku tababaranayay, waxaan ku daray isxirashooyin sharraxaad ah oo waxaan ku dhajiyay soo bandhigga Slideshare Kani waa soo bandhigitaankeyga Shirka Profeserka Suuqgeynta - Shirka Suuqgeynta Ganacsi-Ganacsi ee 2007 Chicago berri iyo Talaado.
Fadlan ka qaado hal saac toddobaadkaaga oo ka daawo muuqaalkan Dave Taylor. Waa soo koobid fantastik ah oo ku saabsan sababta wax loo qoro, sababta loola macaamilayo meheraddaada, faa'iidooyinka baloog garaynta iyo hagaajinta mashiinka raadinta, faa iidooyinka faallooyinka ku jira bartaada sida isticmaalaha loo soo saaray… si fudud waa macluumaad fara badan oo ku jira soo bandhigid weyn.